३५ करोड घाटामा निगम: नयाँ जहाज किन्दै, बहाना बनाउँदै, थन्क्याउँदै ! | जनदिशा
३५ करोड घाटामा निगम: नयाँ जहाज किन्दै, बहाना बनाउँदै, थन्क्याउँदै !
काठमाडौं, ११ भदौ । नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडानतर्फ चालु अवस्थाका आठमध्ये छ जहाज थन्काएको छ। अनि बहाना बनाएको छ, पाइलटै छैन। तर, कागजातले भने निगमसँग जहाज उडाउने पाइलट पर्याप्त भएको देखाउँछ।
नयाँ ल्याएका जहाज समेत नउडाएर थन्क्याउन बहाना बनाउने गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष ३५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी घाटा खाँदै आएको निगमसँग ६ वटा चिनियाँ जहाज छन्। तीमध्ये दुईवटा -ठूला)-एम ६०० र चारवटा साना -वाई १२० छन्। निगमले मुस्किलले एउटा ठूलो र एउटा सानो मात्रै उडाउने गरेको छ भने चारवटा थन्क्याएर राखेको छ।
त्यसैगरी ३० वर्षअघिको ट्वीनअटर विमान पनि साउन १८ देखि एयरपोर्टमा ग्राउन्डेड छ। कुनै बेला १२ वटासम्म रहेका ट्वीनअट्टर अहिले तीनवटा मात्र बाँकी छन्। बाँकी दुईमध्ये पनि एउटा उडे अर्को उड्दैनथ्यो। मुलुकको अति दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने यी जहाजलाई पनि निगमले पाइलट नभएको भन्दै थन्काइरहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
Previous Previous post: निर्मला हत्या प्रकरण : दिलिप विष्ट निर्दोष भए तत्कालीन एसपी डिल्ली विष्ट जालान् जेल ?
Next Next post: काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न भागमा गाईजात्रा पर्व मनाइँदै, भाद्रकृष्ण अष्टमीसम्म जारी रहने